BitStone စျေး - အွန်လိုင်း BST ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitStone (BST)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitStone (BST) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitStone ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BST – BitStone
Market ကဦးထုပ်: $15 724 379.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitStone တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitStone များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitStoneBST သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0982BitStoneBST သို့ ယူရိုEUR€0.0834BitStoneBST သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0753BitStoneBST သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0897BitStoneBST သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.891BitStoneBST သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.621BitStoneBST သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč2.19BitStoneBST သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.368BitStoneBST သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.132BitStoneBST သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.137BitStoneBST သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$2.2BitStoneBST သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.761BitStoneBST သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.534BitStoneBST သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹7.37BitStoneBST သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.16.57BitStoneBST သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.135BitStoneBST သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.149BitStoneBST သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿3.07BitStoneBST သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.684BitStoneBST သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥10.4BitStoneBST သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩116.82BitStoneBST သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦37.73BitStoneBST သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽7.24BitStoneBST သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴2.72
BitStoneBST သို့ BitcoinBTC0.000008 BitStoneBST သို့ EthereumETH0.000252 BitStoneBST သို့ LitecoinLTC0.00173 BitStoneBST သို့ DigitalCashDASH0.000999 BitStoneBST သို့ MoneroXMR0.00105 BitStoneBST သို့ NxtNXT7.24 BitStoneBST သို့ Ethereum ClassicETC0.0142 BitStoneBST သို့ DogecoinDOGE28.98 BitStoneBST သို့ ZCashZEC0.00106 BitStoneBST သို့ BitsharesBTS3.75 BitStoneBST သို့ DigiByteDGB3.37 BitStoneBST သို့ RippleXRP0.34 BitStoneBST သို့ BitcoinDarkBTCD0.00334 BitStoneBST သို့ PeerCoinPPC0.32 BitStoneBST သို့ CraigsCoinCRAIG44.23 BitStoneBST သို့ BitstakeXBS4.14 BitStoneBST သို့ PayCoinXPY1.69 BitStoneBST သို့ ProsperCoinPRC12.18 BitStoneBST သို့ YbCoinYBC0.00005 BitStoneBST သို့ DarkKushDANK31.12 BitStoneBST သို့ GiveCoinGIVE210.08 BitStoneBST သို့ KoboCoinKOBO22.05 BitStoneBST သို့ DarkTokenDT0.0905 BitStoneBST သို့ CETUS CoinCETI280.11
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 23:00:03 +0000.